सम्पादकीय Archives - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
लायन्स क्लवले गोरखा नगरपालिका १० वीरेञ्चोकस्थित तीनघरेमा लायन्स नमूना बस्ती(लायन्स मोडेल भिलेज) बनाउन सुरु गरेको छ । जसका लागि पाँच बर्षभित्र पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । चालु
सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भीड लाग्ने कार्यालय अन्तर्गत पर्छ, मालपोत कार्यालय । जहाँ सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही हुन्छन्, त्यहीँ सबैको चासो बढ्ने गर्छ । सेवाग्राहीहरुले निर्वाध सेवा पाए वा ठगिए भन्नेमा सामाजिक
अहिले गोरखामा सबैभन्दा धेरै चहलपहल काङ्ग्रेस नेता, कार्यकर्ताको छ । १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेसले शनिबार(आज) गाउँ, नगर अधिवेशन गर्दैछ । नगर अधिवेशनका लागि अहिले गोरखाका सडक, होटल, पार्टी
भदौ दुई गते झरेको पहिरोले चुम्चेत र छेकम्पार जाने पदमार्ग क्षतविक्षेत छ । ३८ दिन भयो, ती दुई वडा जाने बाटो अवरुद्ध छ ।बाटो अवरुद्ध भएका कारण ती क्षेत्रमा दैनिक
किन रोकिन्न मालपोतमा बिचौलीया र लेनदेन !
मालपोत कार्यालय गोरखामा सेवाग्राहीको चाप केही समय यता निकै बढेको छ । कोभिड १९ को संक्रमण तिब्र भएका बेला कार्यालयको सेवा बन्द भयो । लामो समय सेवा बन्द हुँदा अहिले
बारपाक सडकमा ठेकेदारको दीर्घ सुताइ
भूकम्प गएको बर्ष अर्थात २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारपाक पुगेर दुई बर्षभित्र बारपाकबासीले कालोपत्रे सडकमा सदरमुकाम जान पाउने भाषण गरेका थिए । उनको घोषणापछि तत्काल सो सडकलाई
धेरै आन्दोलन भए, राज्य व्यवस्थामा धेरै पटक परिवर्तन भए । समावेशी, समानुतिक विकासका नाराहरुले आकाश, धर्ती गुञ्जिए । पुरातनवादी शोषणयुक्त शासनको आरोपमा राजतन्त्र अन्त्य भयो । उत्तर आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
जब दण्ड पाउनुपर्ने मान्छे पुरस्कृत हुन्छ, अनि नेपाली जनमानसमा ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भन्ने उखान प्रयोग हुन्छ ।गोरखाको ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय महत्व बोकेको धरोहर ‘गोरखा दरबार’ पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा शिवाको
गीताको प्रथम अध्याय, ४४ औँ श्लोकमा भनिएको छ :अहो वत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयं,यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताअर्थात ः अहो, कति आश्चर्य । राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै स्वजनहरुलाई समाप्त पार्न